सावधान ! थाइराइड रोग हुन्छ यति सम्म खतरानाक, यस्ता छन बच्ने उपाय (भिडियो) – Etajakhabar
सावधान ! थाइराइड रोग हुन्छ यति सम्म खतरानाक, यस्ता छन बच्ने उपाय (भिडियो)
थाइराइड भनेको एउटा ग्रन्थी हो । यो घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्रघण्टीको तल रहेको हुन्छ । यो ग्रन्थीले थाइरोक्सिन (टी–३) र ट्राइआयोडो थाइरोनीन (टी–४) हर्मोन उत्पादन गर्छ । थाइराइडको खास काम भनेको शरीरको गति नियन्त्रण (मेटाबोलिजम) गर्ने हो ।
मधुमेह भएका बिरामीले वर्षको एकपटक थाइराइडको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । कहिले काहिं हाइपर थाइराइडिज्म्मा मधुमेह रोग पनि देखिन सक्छ । यसमा थाइराइड निको हुनासाथ मधुमेह पनि आफै निको भएर जान्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ३०, २०७५ समय: १२:४०:१२